बालेनको लौरो : बृद्धलाई टेक्न मिल्ने, भ्रष्टचारीलाई सेक्न मिल्ने | SouryaOnline
कृष्ण बोहरा २०७९ जेठ १२ गते ७:०८ मा प्रकाशित
वालेनले जीतेर पनि माहानगरपालिकामा बिद्यमान बिसंगती सबै एक्लैले निर्मूल गर्न सक्लान त ? अहिले धेरैले प्रश्न पनि गरिरहेका छन । किनकी त्यहाँ नगरपालिकाको कार्यकारी संरचना हुन्छ । नगर सभा हुन्छ । त्यहाँ त पार्टीका प्रतिनिधीहरु चुनिएर आएका हुन्छन । सबैले उनले भनेको फटाफट मान्लान त ? घुसखोरी र भष्टचारमा रमाएका पुराना संस्कार बोकेका कर्मचारीतन्त्र हाबी छ माहानगरपालिकामा पनि । उनीहरुले वालेनका लक्षे उद्देश्यहरु के पुरा हुन देलान त ? प्रश्न गर्ने ठाउँ छ । उनको अगाडी चुनौती नै चुनौती छ ।
शीर्षकमा उल्लेख गरिएको बाक्य बालेन शाहको लौरो चिन्हको प्रचारकालागि बनेको नारा हो । आजकल काठमाण्डौं माहानगर पालिकामा युवाहरुको आकर्षण बालेन शाहतीर ब्यापक रुपमा बढेको छ । बालेन शाहको अगाडी कांग्रेस कम्यूनिष्ट दुबैको राजनीति फिका बन्न पुगेको देखिन्छ । देश बिदेशबाट युवाहरुले स्वदेशमा भएका आफ्ना बा आमालाई एक भोट बालेनलाई हाल्न सुझाएका थिए । बालेनको प्रचारमा युवा जमात आफ्नै पैसा खर्च गरेर जुटेको थियो ।
हुँदा हुँदा बालेनको प्रचार यस्तो भयो की माहासागर जस्तै यो उल्टीन थाल्यो । थाहै नपाई कतिपय जिल्लामा जहाँ लौरोका कुनै उमेदवारै छैनन त्यहाँ पनि बालेनको लौरो चिन्हमा भोट खसेको पाइयो । पार्टीका उपल्लो कमीटी धानेका युवा नेताहरुले समेत बालेनको पक्षमा सदासयता देखाएको भनाई सुन्न पाइयो । यसरी स्वतन्त्र रुपमा उठेका उमेदवारको पक्षमा यत्रो जनमत देखिएको नेपालको संसदिय ईतिहासमा यो नै पहिलो पटक हो । नत्र स्वतन्त्र ब्यक्तिले यसरी हैसियत देखाउनु फलामको चिउरा चपानु सरह हुन्थ्यो । यो पनि हो की बुढाहरुले भन्दा युवाहरुले नै बदलिएको बिश्वको आधुनिक रुपलाई छिटो बुझ्न र त्यसलाई ग्रहण गर्न सक्दछन ।
काठमाण्डूका बालेन मात्र हैन स्वतन्त्र उमेदवारको रुपमा चुनाव जितेर धरानका हर्क साम्पाङ र धनगडीका गोपी हमाल पनि यसरी नै चर्चा बटुलेका पात्र हुन । यद्यपी धरान र धनगढीको अवस्था फरक हो । यत्रो जनमत कसरी देखाप¥यो ? त्यो पनि स्वतन्त्र ब्यतिmको पक्षमा । यो बुझ्न कोसिस गर्न पनि नेपाली संसदिय राजनीति र यसले गरेका आजसम्मका गतीबिधी गहिरो सँग नियालेर मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने लाग्छ । यो एकाएक आएको जनमत होइन । तरल पानीले आफ्नो सतह आफै मिलाउँछ । तर डाडाको टुप्पाबाट ढुंगा खस्छ । ढुंगा खस्नु पनि ठोस पदार्थको पनि सतह मिलाउने एउटा प्रयास हो भन्ने रुपमा बुझ्नु पर्दछ । ढुंगा खस्ने मात्र होइन कहिले काहीँ त पहिरो नै जान्छ । यो नेपाली जनतामा लामो समय देखिको पार्टीगत राजनीतिमा देखापरेको जटिलता, अल्झन उल्झन र बेस्वाद तथा वाकवाकी आउने अमन पनाको झल्को हो भन्न सकिन्छ । पार्टीहरुले गरेका अलोकप्रिय काम र युवालाई राजनीतिमा आउन निषेद गरेको अबस्थाको बिस्फोट हो यो ।
जसरी प्रकृतीले समानता चाहन्छ त्यसैगरी सामाजिक वाताबरणले पनि चारैतीरको बार बन्देज तोडेर स्वतः अबस्था सिर्जनाम गर्दै जान्छ भन्ने उदाहरण हो यो । यस्तै स्ट्रक्चरल इन्जिनीएर समेत रहेका वालेनको माहानगरपालिकालाई कसरी बनाउने ? भन्ने योजनाको दस्ताबेज पनि हो । सफा खानेपानी, ट्राफिक ब्यबस्थापन र फोहर ब्यबस्थापन जस्ता कुरामा उनले दिएका योजनाले मानिसको ध्यान तान्न सक्यो । र्यापर बालेन शाह आफ्ना र्याप गीतहरु मार्फत राजनीतिमा देखापरेका बिक्रीती र बिसंगतीहरुलाई युवाहरु माझ राख्दै आएका पात्र हुन । आधुनिक र्याप गीत मन पराउने युवाहरुलाई यसले पनि सहजै आकर्षित गर्न पुग्यो ।
जसरी बिगतमा नेपालमा कम्यूनिष्टहरुले जनताका गीतहरु मार्फत जनताका दुःखहरु र सत्तासिनहरुको अन्याय अत्याचार र भष्टचारका कुरा जनता माझ प्रचार गर्दथे, वालेनले पनि र्याप गीतहरु मार्फत त्यसै गरे । चुनावी घोषणा अरु पार्टीहरुले गरेका घोषणा जस्तै घोषणामै सिमित नै किन नहोस उनले पनि एउटा यस्तै घोषणा पत्र मात्र दिएका हुन । तर पनि जनताका नजरमा पटक पटक प्रमाणित भएका पार्टीहरु र तीनका उमेदवारहरु छन । पार्टीका यी उम्मेदवारका तुलनामा नयाँ र प्रमाणित हुन बाकी स्वतंत्र उमेदवार भएर उभिए वालेन । युवाको आशाको ज्वाला बोकेर आएका स्वतंत्र र सालिन उमेदवार भएको हुनाले पनि उनी बढी चर्चा कमाउन सफल भए ।
माथीका कुरा जे जसो भएतापनि आजका एमालेका बुढा नेताहरु भर्खर बहुदलिय ब्यबस्थाको शुरुवात हुदा २०४७ ताका युवाकै भूमिकामा थिए । आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ कार्यक्रम मार्फत गाउँमा बजेट पठाउने काम र बृद्ध भत्ता जस्ता लोकपृय काम युवाले हैन बरु बृद्ध प्रधानमन्त्री मनोमोहन अधिकारीको पालामा भएको हो । यसैले काम गर्ने असिम चाहना छ भने युवाले पहाड फोर्ने , बृद्धले नुनको ढिका पनि नफोर्ने भन्ने हुदैन । बरु यसपछिका दिनमा कम्यूनिष्टहरु सत्तामा गएपनि कुशासन, भ्रष्टाचार घुसखोरी र अब्यस्थालाई रोक्न नसकेको कुरा भने सत्य हो । कांग्रेस त कांग्रेस भैहाले कम्यूनिष्टले नाम अनुसारको काम गर्न सकेनन भनेको पनि त्यही भएर हो । बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजबाद, मदन भण्डारीको बहुदलिय जनबाद हातीको देखाउने दाँत जस्तो मात्र भयो ।
बीपी र मदनको सिद्धान्त पछिकाहरुले मागी खाने भाडोको रुपमा रुपान्तरण गर्दै आए । यो पनि वालेन जन्मनुको एउटा कारण हो । लामो समय देखिको कुशासन, अन्याय र भ्रष्टचारले डङडङी गनाएका सत्तासिन र यसका पालो फेरोमा शासन चलाएका पक्षबिपक्ष पनि आजको अबस्था श्रृजना गर्न कम जिम्मेवार छैनन । यीनीहरु मध्यकाले गरेका कर्तूतहरु सामाजिक संजाल र अन्य बिबिध माध्यमबाट जनता माझ राख्दै आएका बौद्धीक र सचेत बर्गको भूमिका पनि यो परिस्थिती निर्माणमा महत्वपूर्ण छ । यसैको कारण जनताले पार्टीहरु र तीनका नेताहरुका बारेमा राम्रोसँग बुझ्ने मौका पाए । द्वन्दबादी सिद्धान्त अनुसार गुणात्मक रुपले कुनै बस्तुको परिवर्तन हुनु अघि परिमाणात्मक परिवर्तनले पनि अहम महत्वका भूमिका निर्बाह गर्दछ । सचेत बर्गको भूमिका यहाँनेर परिणात्मक परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण छ ।
अर्को कुरा वालेनले जीतेर पनि माहानगरपालिकामा बिद्यमान बिसंगती सबै एक्लैले निर्मूल गर्न सक्लान त ? अहिले धेरैले प्रश्न पनि गरिरहेका छन । किनकी त्यहाँ नगरपालिकाको कार्यकारी संरचना हुन्छ । नगर सभा हुन्छ । त्यहाँ त पार्टीका प्रतिनिधीहरु चुनिएर आएका हुन्छन । सबैले उनले भनेको फटाफट मान्लान त ? घुसखोरी र भष्टचारमा रमाएका पुराना संस्कार बोकेका कर्मचारीतन्त्र हाबी छ माहानगरपालिकामा पनि । उनीहरुले वालेनका लक्षे उद्देश्यहरु के पुरा हुन देलान त ? प्रश्न गर्ने ठाउँ छ । उनको अगाडी  चुनौती नै चुनौती छ । कसरी पार लगाउँछन हेर्न बाकी छ । चुनौती, चुनौतीको रुपमा मात्र रहन्छ की अवसरमा रुपान्तरण गरेर देखाउँछन पर्खेर हेर्नुछ ।
अर्को एउटा शंका गर्ने ठाउँ छ । उदयीमान कुनै पनि शक्ति की त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिबाट परिचालित हुन्छन । कि त शक्तिमा आईसकेपछि यस्ता शक्तिले परिचालित गर्ने कोशिस गर्दछन र परिचालन गर्दछन । जसको लागि जुनसुकै हतकण्डा प्रयोग गर्न पनि यस्ता शक्ति पछि पर्दैनन । यस्ता शक्ति भनेको कि त यस अघि प्रमाणित भैसकेका शक्तिको नयाँ सिलेबस मात्र हुन्छ । कि त नेपालमा अस्थिरता श्रृजना गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने वाला हुन्छन । के वालेन एउटा चोखो रहलान ? वालेन त एउटा ब्यक्ति न परे । तैपनि शंका गरेको कुरा झुटो साबित होस । यस्तो शक्तिबाट अलग र मूक्त हुन सकुन । युवाका ढुकढुकी बनेका वालेनलाई धेरै धेरै शुभकामना !
अन्तमा स्वतंत्र उमेदवारको जीतलाई राज्यले संस्थागत गर्न सक्नुपर्दछ । स्थानिय निकायमा पार्टीको उमेदवार भन्दा पनि योग्य सक्षम तथा स्वतंत्र उमेदवार भएमा साझा ब्यक्तित्व बन्न सक्छन । स्थानिय जनताको बिकास निर्माण समाज र सम्बृद्धीमा यसबाट महत्वपुर्ण आयाम थपिन सक्छ । यसैले स्थानिय, चुनाव स्वतंत्र ब्यक्तिहरुबाट चुनिने गरी संबिधानमा समेत ब्यबस्था हुने गरी संसोधन हुनु पर्छ भन्ने लाग्छ ।